होली: कलीयुगका युवा-युवतिको यौनको रोमान्स ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
होली: कलीयुगका युवा-युवतिको यौनको रोमान्स !
आज म महिला भएर महिलाकै विपक्षमा पनि बोल्दैछु सबै महिला दिदिबहिनिहरु लाई त म अहँ भन्दिनँ । तर केही केही यस्ता छाडा महिलाहरु जो होली खेल्नकै लागि रंग दल्न र अङग प्रर्दशन गर्नकै लागि पातलो र पारदर्शी सेतो कलरको टिसर्ट किन्छ ,कट्टु लगाउछन् । कस्ले आएर रंग दलि देला भनेर हर्कत देखाउने महिलाको जालो पनि छ । आफ्नो गोप्य अंगहरु दोखाएर केटालाई सुम्सुमाएर मस्ति लुटनकै लागि यस्ता हर्कत गर्नेहरुको संजाल पनि रहेछ ।
हिजो अस्ति ताका यस्तै गफ गर्दै थिए सुन्दापनि रिस उठेर आउने । अनि दोष सबै पुरुषलाई थुपारेर मात्रै कहाँ भयो र खेल्नुपर्छ खेल्नै हुदैन भन्ने पक्षमा म पनि है । तर निधारमा रंग लगाएर सुटुक्क बस्दा के जान्छ ? यस्ताले नै गर्दा त विकृत बढेको छ । स्तन देखि गोप्य अंगसम्म हात पूराउन खोज्छ पुरुष र मस्ति लिने महिला यस्ले नै बढाएको छ कुरीत ।
रङहरुको पर्व होली । विजयको प्रतिकको रुपमा मनाईने यो पर्व तराईमा अझ बिशेष मानिने गर्छ । तर पछिलो समय होलिको रुपमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ । रङहरुसँग खेल्दा छुटै उर्जा आउँछ । तर रङकै नाममा विकृति पनि हुने गर्दछ,जुन कुरा गलत हो । विजयको प्रतिकको रुपमा मनाईने पर्वमा रङहरुसँग होलि खेलौ तर शरिर र संवेदनशील अंगहरुसँग होइन । हुनत अरुले होलि खेलेको देख्दा मलाई पनि रमाईलो लाग्छ । तर म आफु भने रङहरुसँग खेल्न खासै मन पर्दैन ।
रङ लगाउने बाहानामा हातै हाल्न खोज्ने, नचिनेको मान्छेलाई रङ हान्नु, अझ कुहिएको अण्डा र फोहोर पानिले छ्याप्नु संस्कृतिको नाममा विकृति हो । आज हामि कहाँ संस्कृतिको नाममा विकृती भित्रिएको छ । एक आपसमा आत्मियता र सदभाव बढाउने यो पर्वमा रङ लगाउने बहानामा सम्वन्ध र सदभाव नै सङकटमा पर्ने खालका हर्कतहरु हुन थालेका छन । मौलिक संस्कृतिका रूपमा मनाइदै आएका हाम्रा चाडपर्वमा पश्चिमेली प्रभावका कारण त्यसको मूल मर्म नै हराउदै गएको छ । बेलुनमा पानि भरेर हान्ने, फोहर पानी बाटोमा छयाप्ने, केटीहरुको संवेदनशील अंगमा छुने, सिउँदोमा रंग दल्ने होली कै बाहानामा सिन्दुर हाल्ने जस्ता यस्का नकरात्मक पक्षहरु छन् । यस्को जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा रहेको छ । विशेषगरी युवतीहरू होलीबाट नराम्रोसंग प्रभावित छन । यस मामिलामा कतिपय पुरुषहरु निकै अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गर्नसम्म चुक्दैनन् ।
होली खेल्ने मन भए पनि कति महिलाहरु बाहिर निस्कन नै गाहो मान्छन । तर जे जस्तो भएता नि आफुमाथी हुने हिंसालाई सहेर बस्न हुदैन । प्रहरीले पनि जवरजस्ती रङ दल्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने लाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर पहिले त आफु पनि आफै सचेत हुनु जरुरी छ । फेशन अनुसारको ड्रेस लगाउने नाममा पनि उत्ताउला ड्रेस लगाएर वाहिर निस्कनु हदैन । फेशनको नाममा आधा अंग देखाएर हिडदा महिलाको संवेदनशिलता र महत्व वुझेर र पनि वुझ पचाएकाहरुले झन र्दुव्यवहार गर्न सक्छन ।
मैले सुने अनुसार महिलाहरुको पहिरन र व्यवहारमा पनि जीस्काई भर पर्छ । यी विसंगति र विकृतिलाइ झाँगिन महिलाहरुले नै पनि मदत गरिरहेका छन । होली पर्व आफैमा नराम्रो होइन तर समाजमा रहेका पशु बूद्धि भएका युवा युवतीहरुले पर्वका नाममा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अब सिधा सादा महिलाको कुरा गरौं । के नेपाली समाजका महिलाहरु जीस्काइनकै लागि महिला भएका हुन ? किन नेपाली महिलाहरुले आफ्नै समाजका पुरुषहरुबाट स्वतन्त्रता र सुरक्षाको महसुस गर्न पाउदैनन ? फागु पर्वले मानिसमा विद्यमान भेदभाव अन्त्यको सन्देश दिने उल्लेख गर्दै धौभडेलले केटाकेटी, युवायुवती, सबै जातजाति फागुको रङमा रङ्गिने र सबैले खुसीको रङ साटासाट गर्ने भएकाले यो चाड समावेशी चाडसमेत भएको हो ।